Gaalkacyo: Sargaal u dhashay Yaman oo ka tirsanaa Al-shaab oo ay qabteen ciidanka Puntland
Ciidamada Difaaca Puntland ee kusugan Xeebaha gobalka Mudug ayaa gacanta ku dhigay Nin u dhashay dalka Yemen, kaas oo ka yimid dhinaca deegaanada Koonfurta ee Al- Shabaab gacanta ku hayaan, waxaana hadda lagu hayaa Saldhig ay leeyihiin ciidamada dawladda Puntland, isagoo loo gudbin doono magaalada Gaalkacyo.
Saraakiisha ciidamada Amniga ayaa sheegay ninkan oo aan hubeysneyn lagu qabtay deegaan u dhaw degmada Towfiiq ee gobalka Mudug, uuna sheegtay in uu ka soo goostay Al- Shabaab oo ay mudo gacanta ku hayaan.
Laakiin Saraakiishu wey diideen in ay faahfaahin dheeraad ah ka bixiyaan qabashada iyo ninkan wixii uu qaabilsanaa, waxa ayna sheegeen in ay dib ka soo bandhigi doonaan kiiskan ninkan oo hadda baaris ku jira.
Warar madax banaan oo aan ka helnay saraakiisha Amniga ayaa sheegay in uu ninkan u sheegtay in uu kasoo goostay Al- Shabaab, uuna ahaa nin la socdey Dooni laga leeyahay dalka Yemen oo ay Afduub u haystaan kooxdaas.
Puntland waxay dhabarka ka jabisey bishii March ee sannadkan cutubyo ka tirsan Maleeshiyada Al- Shabaab, kuwaas weerar ku soo qaaday deegaano kamid ah xeebaleyda gobalada Nugaal & Mudug, waxaana laga qabtay Maxaabiis, iyadoo ay firxadna qaarkood uga talaabeen dhinaca Galmudug.